Tenisy – «Les petites mains de la Réunion»: vonona ny hiady ny lohany ny solontena malagasy | NewsMada
Tenisy – «Les petites mains de la Réunion»: vonona ny hiady ny lohany ny solontena malagasy
Hanomboka rahampitso, alarobia 19 desambra, ilay fifaninanana antsoina hoe “Les petites mains de la Réunion” izay hotanterahina any La Réunion. Solontena malagasy miisa 4 no handray anjara mandritra izany. Mpilalao notsongaina tamin’ny alalan’ny lalao fifanintsananana, notontosaina ny volana novambra lasa teo ka nahafahana namoaka izay mendrika hiatrika ity fifaninanana ity.
roa vavy sy roa lahy, dia Razakaniaina Maholy, i Robinson Andrianafetra Miarana, Andrianavalona Alvin ary Andrianaivo Raharinosy Harena no hitondra avo ny voninahi-pirenena any La Réunion, rehefa avy nifanintsana tamin’ny mpifandrina azy avy. Ho an-dRazakaniaina Maholy, nolavoiny tamin’ny seta 2 no ho 0 (4/0 4/1) Razafinarivo Mirindra. Niondrika teo anatrehan-dRobinson Andrianafetra Miarana kosa Andriantefihasina Elisoa, tamin’ny seta 2 no ho 0 ihany koa.
Ho an’ny sokajy zazalahy kosa, samy nibata ny fandresena nanoloana ny mpifanandrina taminy, tamin’ny seta 2 no ho 0, Andrianavalona Alvin sy Andrianaivo Raharinosy Harena, ka nahazo ny tapakila ho any La Réunion, hiatrika ny fifaninanana “Les petites mains de la Réunion”. Fifaninanana izay haharitra 6 andro ka tsy hifarana raha tsy ny faha-24 desambra izao.
Marihina fa anisan’ny manatevin-daharana ny delegasiona malagasy hitondra ireto mpilalao ireto, ny mpanazatra nasionaly, Rasolomalala Ando. Izy ireo izay hanainga,anio, hihazo an’i La Réunion.